KGB iyo weheshiga | Cosmos koobi karayn
Posted in xoog . Karma . Matrix . dadka . baraaruga . wax aan waxba tarayn . xaqiiqooyinka
In dalalka yar oo dadka ka mid ah, sida caadiga ah, si ay u 20 malaayiin, xaaladda gaarka ah waxay leeyihiin adeeg qarsoodi ah. Sababtoo ah waxay la kulmaan ninna waxba kama oga, ons sixir, aan la rumaysan karin, baxsanaya iyo had iyo jeer impunity. impunity Comprehensive murug khiyaano iyo foomamka margado dembiga. Addoon The iyaga waayo, ma aha sabab walaac, iyo il wanaagsan ee ay dakhli, taas oo “blooms iyo urta” xataa in times of dimuqraadiyadda caalamka. Waxa ugu yaab leh, in enslavement ee hababka la xadiday tirada dadka.
Wadamada sida, “jinniyo adeegyo gaar ah” Waali hal fikrad: “qorshe” dalka “goglay dixiri”. Si aad u awood iska lahaa tirada ugu badan ee howlno ah, la xiriira by dhiigga, “Jinniyadii oo qarsoon” Waxa ay isku dayayaan in ay ordaan uurjiifka ay tiro badan oo ah “dhadig”. Si arrintan loo sameeyo, waxay, xataa, abaabulo kufsi qoyska, shaqeeya kooxaha waaweyn. Isla mar ahaantaana sharciga jabiyay la xisaabtan la'aanta on “denbiyada abaabulan”. Riyada Ee bulsho, taas oo carruurta ah ee dalka oo dhan waa, kufsaday ay dumar, “jinniyo shar” Isticmaal tallaabooyinka ka hortagga iyo garaac laga heli karaa dhabarka. Oo aan libiqsanayn laga yaabaa cadhaysiinina xaalad, taas oo qaab (booliiska, iwm. maamulka fulinta sharciga) soo kacay muwaadiniinta caadiga ah. Ka dib oo dhan,, addoomo Qalabka looma oggola in ay wada hadlaan amarada, iyo muwaadiniinta halakeeyey mar dambe ma adkaysan Dulli ay awood.
Inkasta oo ay jecelyihiin ordi sare – waxaad u tagi kartaa ganacsiga. Ka dib oo dhan,, dhadig “eekaan biznesyukam guul”. Kuwaas oo ah kuwa, kuwaas oo xadday labo ka mid ah kulanka gobolka. In qarsoodigan ma quudin dalka, oo xoojiya “ganacsiga”. Number dhacay iyo khiyaameeyay kordhaya layskaga, sida gobolka “hodanka ah”. Waayo, gobolka iyo nidaamka canshuuraha jira oo keliya nacasyo daciif-ka yeeli. Oo intuu nacasyada “oo dab ku gub” ama “gariiraya mugdi ah” – “nidaamka” nolosha, iyo “ganacsiga” helitaanka doonee.
In dalalka la nooca ah ee kala duwan ganacsatada guul aan si sharci ah oo colalkii shisheeyaha naf gudbay, oo ha u hoggaansamaan wareeg buuxa ee hawlaha loo baahan yahay in lagu fuliyo, iyo soo unkayo ​​ama la nidaamyada diyaar-dhigay ee dhaqanka ay u baahan yihiin in ay qabsadaan awooda iyo burburka nolosha.
guys geesi, in, sida caadiga ah, ruchkayutsya la “boqorrada bravыmy” ka hor “dabaaldega”, gacmahooda nadiifiyaan on beeraha oo dhan la heli karo waxqabad. Iyo tartanka ay leeyihiin gaar ah. Nacasnimuu waxaa loo arkaa in wareegyada, kuwaas oo “awood u leh inay ku noolaadaan”, iyo ugu Arrimaha Didabadda ay yihiin shaqsiyaadka fittest in nolosha.
Marka uu qof iyaga ka mid ah waxay u baahan yihiin “hurgufo” macluumaad waxtar leh ay diyaarin muran, maxaa yeelay, waxay u malaynayaan, in “Sida runta ah khilaaf dhashay”. inkastoo, waxba, marka laga reebo soo baxda dareenka iyo xadid macluumaad qof kale inta lagu guda jiro kaaga dhirfiyeen sida, ma ka dhacaya. Khilaafka oo keliya ay u baahan yihiin si ay u, si aad u hesho macluumaad, helitaanka oo la xadiday ama aan macquul ahayn. sida ay technology, dhoobo wadhaf at horjeeda, Waxaan u baahanahay sida marmarsiiyo si ay u bixiyaan macluumaad waxtar leh, taas oo badanaa loo isticmaalaa horumarinta hub cusub.
Isagaoo la waxmatarayaal, “huubadiisa” adeegyada ammaanka ama la iska dhaxlo “huubadiisa” Waxaa loo arkaa calaamad u tahay sharafta iyo “uubs”, oo ku dhacda in aan kasta oo aad u dhif ah. Ka dib oo dhan, ay “helitaan sixir” istaahila in ugu kaliya “xoogga ballaarinta cajiib ah”, kaas oo ku siin kara tiro badan oo “humus dhaxlo”. Waxa ugu yaab leh, in kuwa, kuwaas oo u suurtagashay in ay la wareegaan qaab wanaagsan, kuwaas oo dhanna waxay xaaladaha is burinaya ku faraxsan oo ku faraxsan, In kastoo, noolaan lahaa for this. Zeta Zeta aad ugu faraxsanahay. “xayawaanka sare”, rimay dacawo u gaar ah gudahood, isku dayaya in ay dhaawici dacawo kale. Xaaladdan oo kale,, og dabinka kala duwan iyo tabaha, xadgudub ku ah xeerarka dhalashadii labaad, dhufta jirka laftiisa si fiican iyo qaddar macaan, iyadoon loo eegeyn wax. macluumaad noocan oo kale ah waa in ay ku xiran tahay fayraska “daaweynta caafimaad oo caadi ahaan”, oo waa in lagu lug sida sidayaal iyo cudurka.
“jinniyo shar Gaarka ah” cadhaysiinina wax wanaagsan dambiga, waxay iyaga keeni doonaan nacayb iyo indho la'aan xagga firikuwensiyada hooseeyo, iyadoo la kaashanayo qalabka la heli karo, inaad ku biirto eedayn iyaga, Waayo, dembiyadaydii oo dambiyo gaar ah oo ay. Ka dib markii taas oo ay ku andacoonayaan waxaa laga yaabaa in: “Waxaad tahay doorashada isla bipedal fikalnoe sida aynu!” Sayidka, deganaa ee adeegyada ammaanka, abuuro “nooc gaar ah”.
“The Caalamka top shayddaanka” madax bannaan Abuuratay a ilaahyo jiritaan la'aanta, lacagta in iyaga oo kaliya. Oo haddii, waxaad tahay Ilaah – aad leedahay si ay u qabtaan mucjisooyinka, in Satanists qeexo in buugaagta ay. haddii kale – poyschut labaad. Waxaas oo dhan waxaa lagu taageeray by badnaa ee waalan “tuugo”, taas oo u baahan in Ilaah buuxiyo hawadooda, Oo haddii uusan rabin in uu sameeyo – Waxaa loola jeedaa been abuur ah.
The jiilka ka yar Ham zombotuhoy nidaamsan nidaamsan. Zombie joojin doonaa oo kaliya ka dib markii, waxaad bilowday “si sax ah sida calyada”. Quudinta carruurta in ay is-qanacsanaanta waalidka iyo si ay u sameeyaan ka tiirsanaanta cuntada, kuwaas oo foomamka lifaaqa xoog leh “cuntada ee”. Cilmi-galay jidadka awood kale oo la joojiyay ilaa dilka, iyo natiijooyinka cilmi-baarista noqon Ururada qarsoodiga ah oo loo yaqaan, kaas oo ugu dambeyntii u talin nacasyada.
doqon arinku “ragga” Waxay jecel yihiin inay booqdaan meelaha dadku ku, kuwaas oo la beddelay “hamsters cayaar”. “labka”, sida caadiga ah, keeno ay “dhadig” in paddock, halkaas oo ay isku dayaan in ay u dhaqmaan sida wakiilada kale “labka”, kaas oo ka tarjumaya weerarka ku “Shafar” socda. Inkastoo “dumar ah” fidiya “deegaanka” oo ballamo ku dareen oo guur in lagu dhufto – “hamsters mudan” fikiri jawaab jawaabay “labka”. Sidaas razrostaetsya qalcadda Satanism. Oo qaar badan oo ka mid ah “dhadig” kaliya qarin in yards ah, in ay lagama helin. Inkastoo isticmaalka baahsan ee tamartaa hagto, “hamsters” iska ilaalinta hawlaha cilmi khasabka ah. Laga soo bilaabo waxa aan wax tar lahayn factor ee jidhkooda ku socotaa in xad la'aan, iyo jidhka looma baahna. In this caadiga ah lagu xukumay masaafuriyey oo dhan, oo diiday in “barnaamijka pilot khasab ah”. Si kastaba ha ahaatee, malaha, dhaqankooda waxaa sabab u ah xaqiiqada ah, in “xayawaanka sare” saaxiibkiisa noocan ah la ferjiga ee dhoobada “doofaarro sare, chervyami, goglay dixiri, baranbarada iyo dixiriga”, maxaa yeelay, sida jiidata sida.
macalimiinta hami, adeegyada ansixiyey ammaanka, halkii, si ay u gutaan hawl deg-deg ah, Waxay door bidaan in baabbi'in sirdoonka ka iman kara qaybaha kuwa, ka iman kara kaas oo ka badan dhibcood cilmiga on 100-900 kun. Sababo la xiriira nidaamka this of isporozhnyaetsya waxbarashada “godadka madow”. Haddii dissection maskaxda heerka madowga la qorsheeyay lagu guulaysan – ka sida “jidhka” isku dayaya in ay ka takhalusaan horay baaraandegi, si looga fogaado in suurtagalnimada muuqaalka kore ee aragti mustaqbalka. of “maskaxda dhalaalaya” nedoprepodavateli isku dayaan in ay ku milmaan oo dhan dhibaatooyin iyo dhibaatooyinka aad, sidaas dajinaya, ay nolosha way ka yara fudud iyo ka buuxiyey dareen daqiiqad ah Fadilmo. xataa, haddii aan ardayga cajiib ah uu leeyahay waxba kuma laha dhibaatooyinka waxbaridda – suubiyaan “kale ee Karma shubay” digniin la'aan, maxaa yeelay, mid kale ma jiro waa karaynaa inaynu ka adkaanno. In qayb ka, taas waxa laga sameeyaa si, si ay u sameeyaan ardayda, taas oo u noqon karaan tartamayaal halis ah, carar ahayn in sayniska iyo xeerarka dabeecadda. macalimiinta aan istaahilin noocan oo kale ah lagu xukumay eryidda kama dambaysta ah.
Sayidka, in “Caalamka oo dhora” muhiimadda ay leedahay oo keliya nidaamka dhaqaale oo dhora iyo hay'adaha dawladda. Waxa muhiimka ah waa, immisa baruurta ee boorsada jeebka iyo sida deg deg ah magdhow by dhumucdiisuna, oo innaba saxaafadda sida badan xabadaha ama suulasha-out aad gareeyeen uu legyahay. Ugu yaraan leeyihiin qiimo aad awoodda aqooneed, laakiin dalalkaasi ay u galaan obfuscation hoose taranka. Waa arrin aad u muhiim ah in aad u jecel yihiin in ay noqdaan dhalinyarada qof weyn, ay si dhakhso ah isu quusin in dhammaan noocyada kala duwan ee wasakhda.
ugu weyn ee “gelitaanka” carruurta ka iman kara waxay leeyihiin adeegyo gaar ah. Xirrira koox gaar ah ay ku dhowaad ka u ishaartay xaggiisa waxaa durbaba isku dayaya “waxaan gooyay” dhiggooda ah, saarida macluumaad waxtar leh, kaasoo kara inuu dhalin faa'iidada iyo meel kalsooni bulshada la awood u leh inay iyaga u maamusho. Si ka duwan carruurta caadiga ah, waxay, iyo sidoo kale waalidiinta waaweyn, marna “ciyaaro” daacad ah. Isku dayga in carruurnimada “jiita ee dhoobada” wax kasta oo wanaagsan oo ugu quruxda badan, taas oo ay gaari karaan ilaa. Waxaa la ma laga saaray, iyo in sidoo kale laga yaabaa in dad caadi ah.
Wax gubaya, wareegga ah ee hawlaha u gaar ah muhiim Energy hagto waxtar leh, “injirta qolof leh” iyo “qandhicilka prolupivshiesya” doonaya inay taagaan gacanta waaxda tamarta, si ay u ilaaliyaan ilaha dakhliga ee iyaga u gaar ah. Inkastoo, in tamarta this mahad waa hirgelinta oo dhan of wareegyada nolosha, Waxaa ka mid ah ma aha oo kaliya ku qanacsan baahida dabiiciga ah ee u shaqeeyo (hortiisa, mooshin, tantra, robab, cidhiidhi ku dareen, iwm ..), laakiin hawlaha sidoo kale la xiriira keenaya suurtagalnimada ee nolol raaxo, noocyada kala duwan ee tamartaa for kaas oo bixiya Space waynyahay (korontada, dabka, ciidamada magnetic), The jiritaanka iyo ilaahnimadiisa of Cosmos waynyahay ah, habase, ma aqoonsan. malaha, ay sabab u tahay xaqiiqda ah, in “xikmad” waa inay awoodaan in la aqoonsado oo kaliya, isaga garaaca “ryahu”. Oo, si ay ugu qiil ay meel u gaar ah oo wuxuu soo geli wareer arinku, ay ka saari channels TV caadada iyo waxa ku jira oo dhan, waayo, bal yaa eegayaa la socotay “dukaan satanynskomu”. dhab ah, joogo hawl istaahila “Fika”. Naftaada at muraayad – waxay ka tarjumaysaa runta.
Waayo, hawlgalka siman ee dhismayaasha haleysan abaabulay Satanists u arkaa in ay, inay xoolo iyo xoog gacmaha nacasyada iyo sidoo kale ay gacanta ku dhex dhacday. nidaamka kala daatay ayaa qabanaysa nasjonalromantiske ka dhaxleen hidda “dheddigga satanynskyh” yihiin in kasta oo “xukun jecel” oo aan caadi, kaas oo la ogan karo in ay wakhtiyadii hore (tan iyo Casaaseel ah, tusaale ahaan).
Si aad u qaab-dhismeedka haleysan Shafay nidaamyada oo wax fiiriyey dabiiciga ah, qabanqaabiyeyaasha iyo curators ay ku dhuunteen “cell ka jiraan xaalado aan macquul aheyn”, ma mahad gaari waxa loogu talagalay “addoomo nidaamka”.
Sababo la xiriira shaqada oo adag oo ka mid ah dhismayaasha haleysan hore ku tilmaamay dunida ku xeeran waxaa la Hawiyaha ee khadka waqtiyeynta, taas oo badiyaa ah wax matare, rajo. Sababo la xiriira nooca caalami ah oo waxyeello ku deldesheen oo ka badan dhicis, fikrada iyo qaab heegan ah lagu xukumay “Hijrooday ee caadiga ah”. Tani waa si ay u la kulmaan.
Tani waa khiyaanay, taas oo gudcurka “brown” jajabkii. Ciid ma qurxin gudcurka.
aad diyaar u tahay “zdohnut” Board of, carruurtaada had iyo jeer ku noolaa addoonsiga?
Haddii aad ku gabbado “xun” – Waxaa loola jeedaa mid ka mid tahay adiga naftayda baabbi'in, ama waxa la wada dumin doonaa inaad la, laakiin, tahay, waxa aad ka baabbi'in doonaa.
Dhulka hanfi Gomadahanaga hoostoodee iyo “candhuufay buurta samada” – si fiican ku bilowday World Cusub! ((( )))
• ● ⊡ ☆ Oliver Shanti – High iyo Higher ☆ ⊡ ● •
February 2013 sano ee kaalendarka Gregorian.